Shiinaha TLS Wall Mounted Type Relay Automatic Voltage Stabilizer (LED Meter) warshad iyo shirkado | Tailei
Taxane TLS Mount Mount AC xasiliyaha danab xasilinta, taas oo ah hogaamiyaha xulashada American chip ee shirkadeena loogu talagalay guddiga wareegga .Xakamaynta danab ee korantada dusha sare ayaa ku sameyn karta KONTOROOLKA RELAY ama KONTOROOLKA SHAQAALAHA SERVO,maxaa yeelay kan ayaa leh meel weyn oo gudaha ah.
Isbedelada danab ee shabakada korantada ee ka sareysa xeerarka la ogolaan karo waxay keeneysaa cawaaqib xumo qalabka elektarooniga iyo qalabka korontada. Xasiliyayaasha danab ee AC waxaa loogu talagalay inay bixiyaan shaqo tayo leh oo aamin ah oo qalab kala duwan leh marka la eego xaaladaha danab aan degganeyn.
Taxanahan xasilinta danab waxaa loo sameeyay iyadoo loo adeegsanaayo heerarka caalamiga ah ee ka hortagga kacsanaanta awoodda degdegga ah, lagana billaabayo guryaha magaalada waxayna ku dhammaanaysaa dhismayaasha waaweyn ee guryaha iyo wax soo saarka ah.
1.Qalabka korantada ee ballaadhan: AC 140 ~ 260V ama 100-260VAC Ama habeyn
Teknolojiyada 2.High: kumbuyuutar lagu xakameeyo barnaamijka
Naqshadaynta moodada:Muujinta LED taas oo muujin karta dhammaan howlaha ilaalinta.
Caymiska tayada: Qalabka dayactirka ee ugu weyn ee aan annaga iska samaysanay, tusaale ahaan, qalabka wax lagu beddelo, PCB.
5.Function ilaalinta Perfect: ka badan / ilaalinta danab ka yar, ka-kulaylka / ilaalinta load, ilaalinta circuit gaaban.
Shaqada 6.Option: iyada oo qalabka korontada iyo korontada la siinayo laba nooc oo kala sooc ah xulasho danab wax soo saar, marka la eego sahayda marka la eego xilli xasiloon, isticmaaluhu wuxuu ku dhejin karaa xasiliyaha danab ee gobolka saadka, ma jiraan wax awood koronto ah, waa mid dhaqaale oo ku habboon.
7.Waxtarka sare: In ka badan 95%
140-260v / 100-260v Ama habeyn
6 waqti gaaban, 180 dheer
1. Awoodda wax soo gelinta shabakadda waa inay u dhigantaa baahida loo qabo AVR, hawlgalka ugu habboon.2. Ku xir dhammaan fiilooyinka si aamin ah.3. Marwalba daaran badhanka korontada ee AVR marka hore, shid korontada qalabka korontada.4. Natiijooyinka ugu wanaagsan, ha isticmaalin haddii xaalad culeys xad dhaaf ahi jirto.5. Ha u isticmaalin ku-xadgudubyo qoyaan badan ama ololi kara; ka fogow taabashada wax dareere ah.
6. Xidhiidhka ka dhexeeya awooda wax soo saar iyo danab gelinta sida sawirka soo socda iyo jaantuska:
Hore: TLN Xasilloonida Danab Stabilizer
Xiga: TSDL Wareejinta adeegga adeegga danab ee AC
Darbi Jiifka 5kva danab xasilinta
Xasiloonida Danab otomaatig ah ee gidaar ku xiran
Xasiliyayaal danab gidaar leh
TLD Isbahaysiga Relay ee Iskuduwaha Danab Iswada ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Talooyin - Alaabada Featured - Khariidadda bogga - Goob Mobilka Xasilinta danab ee kordhiyaha, 4kva Xasilinta Danab, Xasiliyaha Dijital Dijitaalka ah ee loogu talagalay Ac, 2kva Xasilinta Danab, Xasilinta danab ee Guri dhan, Xasiliyaha danab 5000va, Dhammaan Alaabooyinka